News | कुकुर कुट्दा
News | Tag: कुकुर कुट्दा
नेपालमा पनि यस्तो – कुकुर कुट्दा दुई युवा जेल चलान
काभ्रेपलाञ्चोक । कुकुर कुट्दा बनेपका दुई युवा जेल परेको खबर छ । बनेपा–७ मा कुकुरलाई कुट्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।
प्रत्येक मानिसको शरिरमा कही न कतै कोठी हुने गर्छ । कुनै कोठी ठुला हुन्छन् त कुनै साना । तर तिनीहरु भएको स्थानले ठुलो महत्व राख्ने गर्छ ।
एक अर्वपति जसले नेपालबाट व्यापार सुरु गरेका थिए
निदाउनुभन्दा पहिला विस्तारमा पल्टिएपछि युवतीहरु के सोच्छन् ? धेरैले जान्न चाहान्छन् उनीहरुको दिमागमा के चल्छ ? उनीहरु जब बिस्तारामा पल्टिछन् उनीहरुको दिमागमा धेरै कुराहरु चल्ने गर्छन् । दिनभर भएका विभिन्न कामहरु सम्झिएर उनीहरु दिमागमा कुरा खेलाएर बस्ने गर्छन् ।
छोरीले सुन्नै पर्ने आमाका यी महत्वपुर्ण कुराहरु
अजबगजबको परम्परा !